Ahoana no hanamboarako ny mpanara-maso tambajotra Realtek tsy hita? - Faq
Tena > Faq > Tsy nahomby ny finday Realtek - vahaolana amin'ireo olana
Tsy nahomby ny finday Realtek - vahaolana amin'ireo olana
Ahoana no hanamboarako ny mpanara-maso tambajotra Realtek tsy hita?
1) Atsaharo tanteraka ny solosainao ary esory ny tariby misy herinaratra (na esory ny bateria raha mampiasa laptop ianao). 2) Raha mampiasa PCI ianaoadapter tambajotra, esory nytambajotratariby avy ao ary ampidiro ao amin'nytambajotraseranan-tsambo amin'ny motherboard. Alefaso amin'ny solosaina ary jereo raha manamboatra ny lesoka ity.9 Oktobra 2017
Ahoana no hanamboarako ny adapter Realtek?
Ahoana no hamahako ny olana amin'nyRealtek Network Adapter?
Tsindrio Windows Key + X amin'ny klavinao ary mankanesa any amin'ny Device Manager.
Hitady nyAdapter Network, ary rehefa hitanao fa marina dia tsindrio izany ary safidio ny Uninstall.
Ao amin'ny uninstall windows, safidio ny Delete nyDriverrindrambaiko ho an'ity fitaovana ity.
Midika izany fa misy olana amin'ny adapter tambajotra.
Tsy misy fifandraisana Internet ka holazaiko aminao ireo fomba dimy ahafahanao manamboatra ny olan'ny adapter network, na azo atao na tsia io adapter io, ny azonao atao dia tsindrio havanana ity kisary tambajotra ity ary tsindrio avy eo foibe fizarana tamba-jotra dia tsindrio ny fanovana adapter raha miova amin'ity tranga ity dia tsy mandeha ny adapter tambajotra misy ahy, raha tsy mandeha izy dia hanoratra fa kilemaina indray ianao ary fent, ka raha te hampandeha azy aho dia tsindrio havanana ity Ikona iray ity ary kitiho ny Activate Now raha vao tonga ao amin'ny Evin ilay adaptatera tambajotra Andao hojerentsika izay mitranga, izao dia azonao atao ny mahita fa novain'ny mpianatra ho lasa activated ary ny solosaiko dia mifandray amin'ny tambajotra ankehitriny. Ny dingana voalohany dia ny manamarina raha azo ampiasaina ny adaptatera tambajotra na tsia. Ny dingana faharoa dia ny famerenana ny adapter tambajotra hamerenana ny tambajotra ilainao fotsiny ny manala ny fizotrany sy ny tsindrio havanana ary ny mankarary ary ny tsindrio havanana ary manome ny fampiasa sy hanafoanana ary hamelombelona dia hamerina ny adapter tambajotra, ka ny dingana faharoa dia ny famerenana ny adapter-nao ny tambajotra. Ny dingana fahatelo amin'ny famahana ny olan'ny adapter dia ny manamarina raha toa ka manana ny mpamily napetraka tsara ianao na tsia ka andao mankany amin'ny birao ary tsindrio havanana eo amin'ireo fananana santionan'ny solosaiko.
Izahay dia manamarina raha nametraka ny mpamily tamin'ny marina na tsia. Tsindrio ny manager manager izay mety vetivety. Azontsika atao izao ny manamarina ny adapter tambajotra izay napetraka ao amin'ny rafitray ary manitatra ity adapter iray ity mba hahafahan'ny mpampifandray tambajotra amin'ity tranga ity i Realtech dia afaka mahita fa napetraka tsara ny adapter tambajotra misy ahy. Rehefa misy ny olana dia hitanao fa misy marika marika mavo eo alohan'ilay adapter tambajotra dia.
Ny dingana fahatelo dia ny manamarina raha nametraka ny mpamily ho an'ny adapter tambajotra na tsia ianao raha toa ka nametraka azy tsara ianao dia ho hitanao ny anaran'ny mpampifanaraka tamba-jotra ary eo alohany dia tsy misy, tsy misy teboka fiantsoana na tsipika fiampitana raha te hanavao ity mpamily ity ianao dia afaka tsindrio havanana amin'ilay adapter misy tambajotra ary kitiho ny Update Driver hijerena ny kinova fanavaozana ny mpamily ao amin'ny Windows Store ary raha eo no hametrahana ny mpamily na ny zavatra manaraka azonao atao dia ny mahazo ny adapter ny tamba-jotra misy anao hatramin'ny farany Ny fanavaozana ny kinova dia ny fitsidihana ny tranokalan'ny mpanamboatra. Ohatra, raha manana solosaina findainy ianao dia manana ny nomeraon'ilay solosaina finday, koa inona ianao? Azonao atao ny mitsidika ny tranokalan'ny mpanamboatra ary mampiditra ny laharan'ilay solosaina finday ary mampidina sy mametraka ny kinova marina apetraka na ny kinova fanavaozana ny mpamily, ka ny dingana fahatelo dia ny manamarina raha nametraka ny mpamily ianao sa tsia ary amin'ny fanavaozana kinova farany.
Ny dingana fahefatra amin'ny famahana ny olan'ny adapter dia ny famafana ara-batana ny adapter raha azo atao ary mametraka USB Wi-Fi USB Wi-Fi dongle toa USB USB USB dia toy ny USB drive, saingy natao ho an'ny wi-fi izany. Raha manana an'ity karazana USB Wi-Fi ity ianao dia azonao esorina amin'ny port USB iray ary ampiasao amin'ny port USB hafa hanamarinana raha miasa na tsia ary raha mampiasa karatra tambajotra izay napetraka ao anaty slot PCI ianao. , azonao atao ny manala ny adapter amin'ny tamba-jotra amin'ny slot PCI ary mampiditra azy ao anaty boot PCI hafa mba hahitana raha miasa na tsia ny adapter-nao ary ny dingana farany dia ny fanoloana ny adapter carte de vie card twork adaptercard Ity fomba ity dia azonao atao ny manamboatra ny adapter network olana ao amin'ny Windows 7 Misaotra anao nijery an'ity lahatsoratra ity azafady zarao ary misoratra anarana amin'ny fantsonako mitsidika ny bilaogiko koa
Ahoana no hanamboarako ny fomba fatoriana lalina ao amin'ny Realtek?
RealtekNetwork ControllerFomba fatoriana lalina: Voavaha
Sokafy Device Manager: Mandehana manomboka. Kitiho ny Panel Control.
Open fananana Controller Network: tsindrio Double-adapter Network hanitatra azy. Kitiho indroa nyRealtekNetwork Controller.
VonoyFomba fatoriana lalina: Safidio ny kiheba fitantanana herinaratra.
Ahoana no hanamboarako ny mpampita tambajotra Realtek tsy hita raha alefa ny fomba Deep Sleep Azafady apetraho ny tariby?
“NyRealtek Network Controller tsy hita raha Deep Sleep Mode no alefa azafady apetraho ny tariby”Lesoka miseho hatramin'nyadapter tambajotradia ao amin'nyfomba fatoriana. Mba hialana amin'ny lesoka dia azonao ataofiovananyFomba fatorianatoerana hisorohana nyadaptateramanomboka amin'ny fidiranaFomba fatoriana.27 nov 2020
Ahoana ny fomba fanamboarana ny tsy fahombiazan'ny mpamily Realtek HD Audio?
Ho an'izany: Tsindrio miaraka ny bokotra 'Windows' + 'R'. Soraty amin'ny 'devmgmt.msc' ary kitiho ny 'Enter'. Manorata 'devmgmt.msc' ao anatin'ny hazakazaka haingana. Tsindrio indroa ny sokajy 'Sound, Video and Game Controllers' hanitarana azy. Manitatra ny sokajy 'Sound, Video and game controller'.
Tsy hita ve ny mpanara-maso tambajotra Realtek?
Tsy hita ny Controller Realtek Network. Raha alefa ny fomba fatoriana lalina azafady apetraho ny tariby. Hatreto aho dia nandalo karatra tambajotra 3 samihafa hatramin'ny nahafatesan'ny iray tamin'ny motherboard (z77 Extreme4). Mbola mahazo ny lesoka mitovy amin'izany ihany aho, namerina tamin'ny laoniny ny cmos, sns.
Aiza no ahitako ilay fitaovana audio Realtek?
Avy amin'ny baraovana etsy ambony, kitiho ny Action, ary safidio Add hardware hardware from the dropdown menu. Araho ny mpamosavy hanampy ny sokajy Controllers Feo, horonan-tsary ary lalao, ary koa ny Realtek High Definition Audio Device. Rehefa vitanao izany dia ho hitanao ny Realtek Audio Device ao amin'ny Device Manager.
Ahoana no hamahana ny lesoka tsy miankina an'ny Realtek PCIe Gbe?
Vahaolana: Realtek PCIe Gbe famerana fianakaviana findFile lesoka very ... - HP Support Community - 3264509 Ny kaontinao dia mamela anao hifandray amin'ny fanampiana HP haingana kokoa, miditra amin'ny dashboard anao manokana hitantanana ny fitaovanao amin'ny toerana iray, hijerena ny fampahalalana momba ny fiantohana, toe-javatra sy maro hafa.